AEC Business in AECgateway.com.mm
Brandex Directory ကုမ္ပဏ်၏ကနဦးသည် စက်မှုကုန်ကြော်ငြာပုံနှင်စီးပွါးရေးအမည်စုစည်းပြီး ကြော်ငြာမီဒီယာကုန်ထုပ်လုပ်သူကို ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် စက်မှုဇုန်ရှိစက်ရုံးများသို့ဖြန်ဝေရန် တည်ထောင်မှ အမည်ကို စုံစည်ခဲ့ရသည်။ နောက်တော့ ကုမ္ပဏီသည် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်အဖွဲ့အစည်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဘက်စုံစျေးကွက်ရှဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ မှတ်ဆင့်ပုံရိင်ဖန်တီးအပါအဝင် ကြော်ငြာမီဒီယာ ဖြေရှင်းချက်နှင်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ စက်မှုနည်းပညာခေတ်တွင် စုံလင်စွာ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းအသုံးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်နည်းပညာကို တစ်ဖန်းသုံးခဲ့သည်။ ဥပါဒါန်နှင့်ဝယ်လိုအားအရ ပြောင်းလဲခြင်းခေတ်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ စျေးကွက်ခေတ်သစ်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုရဗယ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် စျေးကွက်ခေတ်သစ်ပုံစံသည် နည်းလမ်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်။
Brandex Directoryသည် ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစသည့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုဖွံဖြိုးတိုးတက်သည်။ လက်ရှိတွင် အဖွဲ့အစည်း ၈၀၀ ကျော်ရှိဖောက်သည်များ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကို လက်ခံပါသည်။ ဤအရာအလုံး ၁၈ နစ်ကျော် ဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက် ကောင်သောသဘောထားနှင့် အသီအမှတ်ဖန်တီးသည့် ဝန်ထမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကို ဖြတိသန်းသွားမှ တန်ဖိုးရှိဖူးသည့်အရာသည် ပျောက်ဆုံးသွားမည်။ သို့သော် Catalogue Director ဆိုသောအမည်အောက်တွင်ထုတ်ဝေခြင်းကို ကုမ္ပဏီသည် မရပ်သန့်နိုင်ပေ။ ထို့အပြင် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ကျေပွန်ရန် ဖောက်သည်များထံလျင်မြန်စွာ ဝင်ရောက်ခြင်းမှာ “အစ” ကို ဖွံဖြိုးတိုးတက်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကြော်ငြာမီဒီယာစီမံခန့်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ရှားဖွေရေးအွန်လိုငးဘက်စုံ ခေါင်ဆောင်မှုထဲသို့ တိုးတက်သည်။
AEC GATEWAY Publishing
အာဆီယံစီးပွါးရေးအသိုက်အဝန် (AEC)သည် ၂၀၁၅ နစ် တရားဝင်စတင်ခဲ့သည်။ Brandex Directory ကုမ္ပဏီသည် အာဆီယံဝင်ရောက်သို့ ထိုင်းစက်မှုကြော်ငြာမီဒီယာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရခဲ့သည်။ စက်မှုမီဒီယာကို CLMV စျေးကွက်ထဲကို ဦးစွာဖန်တီးပါသည်။ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံး၏CLMV Marketplace ဆန်သစ်တီထွင်မှုများကို တင်ပြသည်။ www.AECgetway.com.mm သည် ကုန်ထုပ်လုပ်သူရောစားသုံးသူအတွက်ကျိုးဖြစ်သော နိုင်ငံကြားကုန်စည်းဝယ်ခြင်းတုံ့ပြန်သည့် ဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာရှိ၍ ဒါကထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၀ယ်သူနှင့်ရောင်းသူများကို အလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ဆိုရန်လွယ်ကူစွာ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ဒေသဘာသာစကားကိုအသုံးပြုပါသည်။
AEC Business, B2B place website for all business. AEC Business for Make you own connection with foreigner entrepreneurs. AEC Business in AECgateway.com.mm